Fampisehoana : hiverina an-tsehatra i Honoré | NewsMada
Ny taona 1993, fantatra sy nisongadina tamin’ilay hira « Tsy misy miala eo Rasta » i Honoré. Sanganasany anisan’ny nahatety vanim-potoana maro tokoa. Tsy afaka am-bavan’olona maro. Fantatra fa hiverina an-tsehatra ity mpanakanto manana ny maha izy azy ity. Vazo vao mafana hoentiny manamarika izao fiverenany an-tsehatra izao ny « Hiova » izay efa vita rakitsary tazana any amin’ny televiziona samihafa. Hira manolotra tokim-pitiavana sy maneho fahavononana ny hiala amin’ny toetra hita fa tsy tsara. Tanjon’i Honoré rahateo ny hanabe sy ny hanala voly ny olona tsirairay.
Hanao tohivakana ny fiakarana an-tsehatra ho an’ny tarika. Anisan’izany ilay fampisehoana hotanterahina any Morondava ny 8 marsa izao. Any Mahavelona ny 28 marsa. Marihina fa fototra iaingan’i Honoré ny soukouss. Na izany aza, manao ny gadona rehetra izy. Anisan’ireny ny salegy, tsapiky, slow, sns.
Raha tsiahivina, sady mahafehy ny famoronan-kira, fandrindrana ary fitendrena zavamaneno ity mpanakanto ity izay solofo dimbin’ireo ray aman-dreniny izay namorona ny tarika mpanao hiragasy « Fanevan’ny tatamo ». Nanampy indrindra an’i Honoré tamin’ny fampivelaranany talentany ny naha mpikambana azy tao anatin’ny antoko mpihira tany Miarinarivo Itasy.